I-Casa das Pérgolas yasehlotyeni / iRetreat yasebusika, eComporta - I-Airbnb
I-Casa das Pérgolas yasehlotyeni / iRetreat yasebusika, eComporta
ICasa das Pérgolas ingaphezulu kwendlu eselunxwemeni, yindlu etofotofo kakhulu ehlotyeni okanye ebusika, iyenza ibeyindawo egqibeleleyo yokurhoxa ngoxolo unyaka wonke.
Indlu yethu entsha kraca ibekwe eBrejos da Carregueira de Cima, umgama wemizuzu emi-5 ukusuka kunxweme lwaseComporta, eCarvalhal nasePego. Ungaphinda urente ibhayisekile kufutshane kwaye ufikelele kumanxweme angasese angafikeleleki lula ngemoto. Indawo egcinwe kakuhle yehlathi lepine phambi kwendlu yethu ifanelekile kuhambo lwasekuseni.
Indlu yakhiwe ngo-2018, iyilwe ngumyili wePutukezi we-MIMA Housing enikwe "iBhaso loKwakha loNyaka" yi-ArchDaily ngo-2013 kwaye iboniswe kwiimagazini ezininzi zezokwakha zamazwe ngamazwe ezifana ne-Dezeen kunye ne-Archilovers.
Le ndlu inamagumbi okulala amathathu anomoya opholileyo. Ababini kubo baphangalele kwaye banebhedi elingana nokumkanikazi kunye negumbi lokuhlambela leen-suite. Igumbi lokulala lesithathu lincinci (i-9 sqm ngaphandle kwe-closet kunye nepaseji), ineebhedi ezimbini zomntu omnye kunye negumbi layo lokuhlambela elineshawari (hayi i-en-suite).
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo. Kukho i-terrace enkulu enendawo yokutyela yangaphandle, idama lokuqubha (3X10m, 1.75 m ubunzulu) kunye nezitulo zokutshisa ilanga. Akukho luthango olujikeleze idama lokuqubha, akucebisekanga kubantwana abangakwaziyo ukuqubha-sebenzisa ngomngcipheko wakho!
Indlu yonke yakhiwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kunye ne-insulation ephezulu. Ukufudumeza umgangatho okhanyayo, iWi-Fi, iNetflix kunye neTV yesathelayithi ziyafumaneka. Le ndlu ineSiqinisekiso sokuSebenza saMandla A +.
Le yindawo encinci kwaye izolile eComporta. Kukuhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka kwezona lwandle zibalaseleyo kulo mmandla kunye namasimi amahle erayisi onokuthi uhambe ngawo okanye uhambe ngebhayisekile.
Ngaphambi kwendlu yethu kukho indawo enkulu yokugcina indalo elungele ukubukela iintaka, ukubaleka okanye ukuhamba ngokulula.
Kukho isikolo sokusefa, isikolo sokukhwela amahashe kunye nenkonzo yokurenta ibhayisekile kufutshane.
Umgcini wendlu wethu omangalisayo uya kukwamkela xa ungena kwaye akucacisele konke okufuneka ukwazi malunga nendlu kunye nendawo. Sifumaneka ngalo lonke ixesha ngefowuni, nge-imeyile okanye ngomyalezo wakwa-Airbnb kwaye siya kuza ngokukhawuleza ukucombulula nayiphi na ingxaki.
Umgcini wendlu wethu omangalisayo uya kukwamkela xa ungena kwaye akucacisele konke okufuneka ukwazi malunga nendlu kunye nendawo. Sifumaneka ngalo lonke ixesha ngefowuni, nge-imeyi…
Inombolo yomthetho: 77618/AL
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$633
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Comporta